Caalamka, 29 April 2019
Sri Lanka oo mamnuucday Indho-shareerka
Sri Lanka, oo weli aan kasoo kaban saameynta qaraxyadii dalkaas dhacay Axaddii Easter, ayaa amnuucday indha-shareerka ay xirtaan haweenka.
Sri Lanka oo oo tuhuntay Daacish
Reysal wasaaraha Sri Lankan Ranil Wickremesinghe ayaa sheegey, in ay suurtagal tahay in weerarkii Axaddii lagu qaaday kaniisado dalkiisa ay ka dambeeyaan kooxda Daacish.
Daacish oo Sheegatay Mas'uuliyadda Weerarradii Sri Lanka.
Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarradii Axaddii lagu qaaday kaniisado iyo hotello ku yaalla dalka Srilanka ooay ku dhinteen in kabadan 300 oo qof.
Yaa Lagu Tuhunsanyahay Qaraxyadi Sri Lanka?
Dowladda Sri Lanka ayaa maanta sheegtay in ay rumeysantahay in koox Muslimiin mintidiin ah ay ka danbeeyeen, weeraradi Axaddi lagu qaaday dalkaasi oo ay ku dhinteen ku dhawaad 300 oo qof.
Srilanka: 207 qof oo ku dhintay Qaraxyo
In kabadan 207 qof ayaa maanta oo Axad ah ku dhintay qaraxyo lala eegtay kaniisaddo iyo hoteello ku yaalla dalka Srilanka. Qaraxyadan waxaa ku dhaawacmay in ka badan 400 oo qof.
Afar Nin oo Lagu Dilay Sacuudiga
Warbaahinta Sacuudiga ayaa ku warrantay in la dilay afar nin oo weerar ku qaadday saldhig ay ciidamada amaanka boqortooyada ku leeyihiin Magaalo ku taalla dhinaca waqooyi ee caasimadda Riyadh.
Doorasho Madaxweyne oo Ka Socota Ukraine
Dadka reer Ukrain ayaa maanta codadkooda ka dhiibanaya doorashada madaxtinimada, taasoo la filayo in xafiiska ugu sarreeya waddanka lagu aamini doono nin majaajiliista ah oo aanan laheyn khibrad siyaasadeed.
Turkey oo xiray rag u dhashay Imaaraadka
Turkiga ayaa maanta xiray laba nin oo looga shakiyay in ay u jaajuusayeen dowladda Isutagga Imaaraadka Carabta, iyadoo sidoo kalana hadda la baarayo in ay lug ku lahaayeen dilkii magaalada Istanbul sannadki hore loogu geystay Jamal Khashoggi.